मेलिना भन्छिन्, मिडियाहरु बेकारको प्रश्न सोध्छन् ‘सेक्स भनेको के हो ?’
Sun, May 27, 2018 | 15:18:45 NST
09:23 AM ( 1 year ago )
काठमाडौं, चैत २५ – अभिनेत्री मेलिना मानन्धरले ‘प्रियसी’ चलचित्रबाट सिने नगरीमा प्रवेश गरेकी हुन् । उनले प्रेमपिण्ड, जालीरुमाल, सिमाना, रानीखोला, मामाघर जस्ता हिट चलचित्रहरुमा काम गरिसकेकी छिन् भने ठूलो पर्दामा ‘ज्वालामुखि’ र टेलिफिल्म ‘करुणा’ निर्माणसमेत गरेकी छन् ।
कुनै समय निकै चलेकी नायिका मेलिना अहिले भने चलचित्रमा एकदमै कम झुल्किने गरेकी छिन् । सेन्सर बोर्डकी सदस्यसमेत भएर काम गरेकी मेलिना अहिले परिवार र चलचित्र बाहिरकै काममा ब्यस्त छिन् । श्रीमान मुकेश ढकाल अमेरिका गएपछि मेलिना आफूलाई हरेक कुरामा समय अभाव भईरहेको महशुस गर्छिन् । यद्यपी उनले दुईवटा चलचित्र ‘लालटिन’ र ‘रोमियो’मा काम गरेकी छिन् जुन चलचित्रहरु रिलिजको तयारीमा छन् ।
सानैमा निधार फुट्यो
मेलिना मानन्धर आफू सानोमा एकदमै सरल र ज्ञानी बच्चा भएको बताउँछिन् । कुनै पनि काममा नहडबढाउने उनको स्वभाव थियो । केही कुरा हेरेमा एकोहोरो भएर हेरिरहन्थिन् । पढ्नमा उनको रुचि फिटिक्कै थिएन जसका कारण उनले आफ्नो अध्ययनलाई उच्च शिक्षासम्म पुर्याउन सकिनन् । पढाईमा किन मन लागेन त ? जवाफमा मेलिना भन्छिन्, ‘ खै ममा पढ्नु पर्छ भन्ने जोश जाँगर नै आएन । त्यसमाथि स्कुलको वातावरणले मलाई नपढ्नलाई बल पुर्यायो । शिक्षक एकदमै कडा हुनुहुन्थ्यो । सायद पढ्ने वातावरण राम्रो भएको भए म धेरै पढ्थेँ होला । पछि पढ्न रहर हुँदा नि मैले उच्च शिक्षा पढ्न सकिन ।’
सानोमा धेरै बदमासी गर्नुहुन्थ्यो कि क्या हो है ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा मेलिना भन्छिन्, ‘मैले सानोमा उट्पट्याङ र बदमासी गरेको मलाई सम्झना नै छैन । बरु एक पटक घरमै बसिरहँदा झ्यालबाट खसेको छु । त्यतीबेला खै के हेरेको थिएँ बाहिर । झ्याल र हाम्रो बेडको उचाई बराबर भएको कारण झ्यालबाट सिधै तल खसेछु । मेरो त्यतिबेला निधार फुटेको थियो र हस्पिटलाइज हुनु परेको थियो ।’
सेन्सर बोर्डमा काम गर्दाको अनुभव
मेलिना मानन्धरले चलचित्र सेन्सर बोर्डको सदस्य भएर लगभग दुई वर्ष काम गरिन् । उनले त्यो समयमा चलचित्र सेन्सरको अनुभव खुबै राम्रोसंग बटुल्ने मौका पाईन् । आफूले काम गरेको त्यो समयावधिमा कुनै चलचित्र निकै राम्रो र कुनै चलचित्रको बारेमा बोल्न पनि नमिल्ने खालको बनेको प्रतिक्रिया उनले दिईन् ।
कलाकारिता क्षेत्रमा आउन र काम गर्न रहर धेरैको भएको र यहि मेसोमा काम गरेका कलाकारहरुको सिनेमाबारे छुच्चो भएर उनी कहिल्यै पनि बोलीनन् । मेलिना भन्छिन्, ‘सेन्सरमा बस्दा चलचित्र हेरेपछि नराम्रो छ भन्न हामीले कहिल्यै मिल्दैन । तर चलचित्रकर्मीले आफैले गलत र सही कुरालाई समेटेर चलचित्र बनाउनु पर्छ ।’
सानोमा लाज लाग्ने काम
बाल्यकालमा अति नै सरल मेलिनाले परिवारबाट गाली खाने काम खासै गरिनन् । काठमाडौंमा जन्मे, हुर्केकी मेलिना परिवारकी कान्छी छोरी हुन् । उनी सरल भएकै कारण विश्वास गरेर आमाले पैसा पनि राख्न दिनुहन्थ्यो । हत्तपत्त गल्ती नगर्ने मेलीनाले साथीको लहै-लहैमा लागेर एक पटक पैसा भने चोरेकी थिईन् ।
उनले त्यस बखत एक सय चोरेको कुरा सम्झदै भनिन्, ‘ त्यो पल अहिले सम्झिँदा मलाई एकदमै लाज लाग्छ । किन गरेछु ! जस्तो महशुस हुन्छ । खासमा साथीले चोर्दा केही हुन्न । बुवाआमाले थाहा पाउनुहुन्न भनेर मलाई हौसाएपछि मैले त्यसो गरेको हो । त्यो समयको १ सय रुपैयाँ अहिलेको हजार रुपैयाँ भन्दा पनि धेरै हो नि ! तर मैले त्यो पैसा खर्च गर्न नसकेर आमालाई नै भेटेको भनेर फिर्ता गरिदिएँ ।’
धेरै वर्षसम्म रगतले लेखेको प्रेमपत्र सम्हालेर राखेँ
उनको सुन्दरतामा नलठ्ठिने प्रायः कमै होलान् । उनको जीवनमा धेरै किसिमका फ्यानहरु आए जो उनीसँग जीवन बिताउन चाहान्थे । उनका बच्चादेखि बुढासम्मका फ्यानहरु छन् । विवाहित भएको थाहा हुँदा पनि आफूलाई चाहनेहरु धेरै भएको मेलिनाले बताईन् ।
जीवनमा आफूले सानैमा सँगै पढ्ने एक जना केटालाई मन पराएको कुरा उनले खोलिन् । तर उनीसँग पछि स्कुलमा पिटापिट भएर उनको सम्बन्ध छुट्टियो । पछि फेरि एक फ्यानले उनलाई रगतले लेखिएको प्रेमपत्र पठाएका थिए । धेरै वर्षसम्म उनले त्यो प्रेमपत्र संगालेर राखेकी थिईन् । किनकी उनी आफैलाई पनि त्यो प्रेमपत्र प्यारो लाग्थ्यो । उनले यसो भनिरहँदा हामीले अहिले पनि छ ? भनेर सोध्दा उनी भन्छिन्, ‘दुःखको कुरा मैले सधै संगालेर राख्न सकिनँ । अहिले त कहाँ पुग्यो थाहै भएन ।’
नाङ्गो फोटो आयो
जीवनमा हत्तपत्त विवादमा नआएकी मेलिनालाई मिडियाका केही कुराहरुले भने निकै हाँसो उठाउँदा रहेछन् । अन्र्तवार्ता लिन आउनेले आफूलाई अझै पनि तपाईँको पहिलो सिनेमा कुन हो ? भनेर सोध्छन् । यो प्रश्न सुन्दा उनलाई एकदमै हाँसो उठ्छ । अर्को कुरा ‘सेक्स भनेको के हो ?’ भनेर उनलाई धेरै मिडियाकर्मीले सोधेका रहेछन् । यो पनि उनलाई फिटक्कै मन नपर्ने र धेरै हाँसो उठाउने प्रश्न हो ।
सेक्स सम्बन्धी सोधिने प्रश्नका बारेमा बोल्दै उनी भन्छिन्, ‘कुनै समय प्राय : सबै पत्रपत्रिकाले आफ्नो ग्राहक पाठक बढाउन यस विषयमा लेख्नु भो । कलाकारहरुलाई सोध्नु भयो । तर अहिले त्यो चलन हटेको छ । बेकारको लाग्छ त्यो प्रश्न मलाई ।’
जीवनमा मिडियाका कारण कहिल्यै अफ्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ ? भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा मेलिना भन्छिन्, ‘छ नि । एक पटक फोटोसपबाट मेरो टाउको र अर्काे व्यक्तिको भल्गर जिउ राखेर फोटो छापिएको रहेछ । त्यतीबेला म संगै ४/५ जना नायिकाहरुको फोटो त्यसरी नै बाहिरिएको थियो । त्यसले बजारमा निकै हंगामा मच्चाएको थियो । तर मलाई भने त्यो कुराले हाँसो उठेको थियो । किनकी मैले त्यो काम गरेकै थिईन । त्यहि भएर के रहेछ ! भनेर मैले पनि हेरेँ (लामो हाँसो) । तर त्यो काम गर्ने पत्रकार भने भागाभाग हुनुभयो । बेकारको लफडा निकालेर ।’